yinn mar'စာမျက်နှာ - အဖြူရောင်အွန်လိုင်းပရဟိတအသင်း
ဘလော့ပို့စ်များ (1)ဆွေးနွေးချက်များ (1)အဖွဲ့များ (1)ဓာတ်ပုံများ (1)ဓာတ်ပုံအယ်ဘမ်ဗွီဒီယိုများ yinn mar's Apps
♥A D M I N♥+!!သစ်စာတော်လေး+!! leftacomment for yinn marSundayyinn mar shared their discussion on Facebookအလွမ်းသံသရာApr 5++♥♥ဘေဘီလုံးးး++♥♥++% leftacomment for yinn mar" "Aug 28, 2013ဆောင်းရတီ replied to yinn mar's discussion အလွမ်းသံသရာ in the group ကဗျာချစ်သူများ"အားပေးသွားပါတယ်ယင်းမာရေ..
ဆောင်းကိုချစ်ရင်ကဗျာတွေပြန်ရေးနော်...အားပေးနေမယ်အမြဲတမ်း.. :P"Feb 6, 2013yinn mar addedadiscussion to the group ကဗျာချစ်သူများအလွမ်းသံသရာ မေ့မရခဲ့ပါဘူးကွယ်နေ့ရက်တွေသာ ကုန်လွန်ခဲ့ပေမဲ့အလွမ်းတွေနဲ့ နှလုံးသားကိုတော့ဝေးကွာခြင်းတွေက ..................သဂြိုလ်ခွင့် မရခဲ့ပါဘူးမင်းမသိခဲ့ပါဘူးကွယ်ညဉ့်နက်နက်ရဲ့အောက်မှာမျက်ရည်စက်တွေအခစားရောက်ခဲ့ရတာမေ့ရခက် မုန်းရခက်နဲ့ ရင်ခုန်သံတွေလည်းနာကျင်ခဲ့နေပါပြီမြင်ယောင်ဆဲပါအတိတ်က အရိပ်နှလုံးသား ကြေးမုံရိပ်မှာတိတ်တိတ်လေး ငေးမော.....................ရင်မောလှပါပြီအော်.........အတူဆုံချင်ပေမဲ့ ကံကြမ္မာရယ် ......ခုတော့ခွဲရက်တယ်အလွမ်းတွေရဲ့နိဂုံး ..........................ဘယ်ချိန်ဖြစ်မလဲဆိုတာ…ဆက်ကြည့်မယ်Feb 6, 2013 1
yinn mar joined ツi♥♡S☻စိုးလေး☻i♡♥Sツ's groupကဗျာချစ်သူများမိမိတွင်ရှိသော ခံစားချက်လေးများကဗျာလေးများကိုယခုနေရာတွင်ဖြန်.ဝေနိုင်ပါသည်ကဗျာချစ်တတ်သူများအတွက်ကဗျာလှလှလေးတွေရေးနိုင်ပါစေဆက်ကြည့်မယ်Feb 6, 2013 8
yinn mar liked ချင်းမင်းသားလေး's discussion ကျေနပ်ပါသူချစ်သူFeb 5, 2013yinn mar commented on ツi♥♡S☻စိုးလေး☻i♡♥Sツ's blog post ကဗျာ ပြိုင်ပွဲ အကဲ ဖြတ် ဒိုင်များ အသိပေးစာ"ဖတ်သွားပါတယ်ရှင်"Feb 5, 2013yinn mar commented on မှော်ဂျိုးဖြူ's blog post သူသိပါစေ"အားပေးသွားပါတယ်
"Feb 5, 2013yinn mar commented on ပီတိ(ပေကြီး)'s blog post လူငယ်မောင်မယ်များနှင့် သူမပေးတဲ့ဥစ္စာကိုယူခြင်း"အားပေးဖတ်ရှုသွားပါတယ်
ဒီထက်မက စာပေတွေကိုဆက်လက်ရေးသားနိုင်ပါစေ"Feb 2, 2013yinn mar commented on ပီတိ(ပေကြီး)'s blog post လူငယ်မောင်မယ်များနှင့် သူမပေးတဲ့ဥစ္စာကိုယူခြင်း"အားပေးဖစ်ရှုသွားပါတယ်
"Feb 2, 2013yinn mar leftacomment for ချစ်ငယ်လေး"ချစ်ငယ်လေး မွေးနေ့မှာပျော်၇ွှင်ပါစေ
ဆန္ဒနဲ့ဘ၀ တစ်ထပ်ထဲကျပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်နော်"Jan 31, 2013yinn mar commented on ဘလော့ခရီးသည်'s blog post ရွှေတိဂုံစေတီတော်အောက်ကလျို့ဝှက်၂ခုကိုအာမေးနီးယန်းလူမျိုးတစ်ယောက်ကသိ"အားပေးသွားပါတယ်
"Jan 28, 2013yinn mar ပုံအသစ်တင်ခဲ့သည် 1358829545_picsay-1358829545Jan 28, 2013 1
+Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ✿မေခခမောင်✿Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄✿ leftacomment for yinn mar"အဖြူရောင်အားမာန် ၀လ်ဆိုဒ်လေးမှ လာရောက်လည်
ပတ်သူအားလုံးကို နွေးထွေးစွာဖြင့် ကြိုဆိုပါတယ် ရှင့်
ဆိုဒ်လေးထဲမှာ စည်းကမ်းလေးတွေလိုက်နာပြီး ဗဟုသုတတွေရှာဖွေရင်းနဲ့ ပျော်ရွှင်စရာစကားဝိုင်းလေးထဲမှာ ဆုံတွေ့ကြပါစို့လို့အဖြူေ၇ာင်အားမာန်…"Jan 27, 2013 နောက်ထပ်ကြည့်မယ် RSS
အားလုံးကြည့်မယ် Comment Wall (16 comments)
You need to beamember of အဖြူရောင်အွန်လိုင်းပရဟိတအသင်း to add comments!
April 20, 2014,ရက် 4:24pm တွင် ♥A D M I N♥+!!သစ်စာတော်လေး+!! မှ ပြောကြာခဲ့သည်..... April 5, 2014,ရက် 9:58am တွင် ♥A D M I N♥+!!သစ်စာတော်လေး+!! မှ ပြောကြာခဲ့သည်..... April 3, 2014,ရက် 9:49am တွင် ♥A D M I N♥+!!သစ်စာတော်လေး+!! မှ ပြောကြာခဲ့သည်..... April 3, 2014,ရက် 9:48am တွင် ♥A D M I N♥+!!သစ်စာတော်လေး+!! မှ ပြောကြာခဲ့သည်..... April 3, 2014,ရက် 9:47am တွင် ♥A D M I N♥+!!သစ်စာတော်လေး+!! မှ ပြောကြာခဲ့သည်..... April 3, 2014,ရက် 9:46am တွင် ♥A D M I N♥+!!သစ်စာတော်လေး+!! မှ ပြောကြာခဲ့သည်..... April 3, 2014,ရက် 9:46am တွင် ♥A D M I N♥+!!သစ်စာတော်လေး+!! မှ ပြောကြာခဲ့သည်..... April 3, 2014,ရက် 9:45am တွင် ♥A D M I N♥+!!သစ်စာတော်လေး+!! မှ ပြောကြာခဲ့သည်..... April 2, 2014,ရက် 9:52am တွင် ♥A D M I N♥+!!သစ်စာတော်လေး+!! မှ ပြောကြာခဲ့သည်..... April 2, 2014,ရက် 9:52am တွင် ♥A D M I N♥+!!သစ်စာတော်လေး+!! မှ ပြောကြာခဲ့သည်..... မင်္ဂလာပါသူငယ်ချင်း အားမာန်မှနွေးထွေးစွာကြိုဆိုပါတယ် သူငယ်ချင်းသိချင်တာလေးတွေ နားမလည်တာလေးတွေကို အတူမျှဝေခံစားရင်းနဲ့ ပျော်ရွှင်ကြည်နူးပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ် သူငယ်ချင်းနားမလည်တာများရှိခဲ့ရင် ဆိုဒ်တာဝန်ခံအက်မင်များကို မေးနိုင်ပါတယ် ဆိုဒ်လေးမှာ အေးချမ်းပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလျှက် အဖြူရောင်အားမာန် အက်မင်းများဆိုက်မှ လှုပ်ရှားမှု သတင်း/ ကဏ္ဍများ / နှင့် ကဗျာများ ကို အစဉ်စက်မပြတ် ဖတ် ရှုနိင်ရန် apk အားအောက်ပုံအးနှပ်ပြီးဒေါင်းလော့ရယူနိင်ပါတယ်
Ma Moh Moh Khaing
လက်ဆောင်ပေးရန် Tuang No
လက်ဆောင်ပေးရန် အညာက ( ကလေးလေး )
လက်ဆောင်ပေးရန် © 2014 တည်ထောင်သူ အဖြူရောင်နတ်သား. Powered by